Inoveli yaseTanzania emangalisayo yeMbasa yeNobel yoNcwadi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba » Inoveli yaseTanzania emangalisayo yeMbasa yeNobel yoNcwadi
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • inkcubeko • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ophumelele amabhaso kaNobel kunye nomlobi wenoveli waseTanzania u-Abdulrasak Gurnah
Inoveli yaseTanzania u-Abdulrasak Gurnah upapashe iinoveli ezili-10 kunye namabali amafutshane amaninzi, uninzi luye lwalandela ubomi beembacu njengoko zijongana nelahleko kunye nomothuko obangelwe kukuthinjwa kwelizwekazi laseAfrika, into umbhali athe waphila ngayo. Uye wabizwa nge-2021 Nobel Prize for Literature.
Ngelixa wayeselubhacweni, u-Abdulrasak Gurnah waqala ukubhala njengesixhobo sokulwa nokwenzakala ngenxa yokushiya ilizwe lakhe.
Waba lilizwi elibalulekileyo lamava kunye nembali yokulandela ubukoloniyali baseYurophu kwilizwekazi laseAfrika.
Ungowokuqala ukufumana i-africanine kwi-Nobel Prize yoLwazi lweNcwadi malunga neminyaka engama-20.
UGurnah wazalwa ngo-1948 eZanzibar. Emva kokukhululwa kubukhosi base-Bhritane ngo-1963, uZanzibar wadlula kwimvukelo enobundlobongela eyakhokelela ekutshutshisweni kwabantu abambalwa abangama-Arabhu. Ukuba lilungu lohlanga ekujoliswe kulo, uGurnah wanyanzelwa ukuba abalekele eNgilane xa wayeneminyaka eli-18. Kwakusekuthinjweni apho waqala ukubhala njengendlela yokujamelana nentlungu yokuhamba kwilizwe lakhe.
Umphathiswa Wezangaphandle eJamani, u-Heiko Maas, ukhuphe ingxelo ngo-Okthobha 7, 2021, ngesigqibo seKomiti yeNobel sokuwongwa ngeBhaso likaNobel kuLwazi ku-Abdulrazak Gurnah. Ingxelo ithi:
“Sikunye nombhali waseTanzania u-Abdulrazak Gurnah, hayi kuphela ilizwi elibalulekileyo lokuhlonitshwa emva kololoniyalizim, kodwa ukwanguye nowafumana umvuzo wokuqala wase-Afrika kweli candelo phantse kwiminyaka engamashumi amabini. Kwincwadi yakhe yamabali kunye namabali amafutshane, uGurnah uthetha ngembali yekoloniyalizim kunye neempembelelo zayo e-Afrika, eziqhubeka nokuzenza ukuba bazive namhlanje-kubandakanya nendima eyadlalwa ngabalawuli bobukoloniyali baseJamani. Uthetha ngokucacileyo ngokuchasene nomkhethe kunye nobuhlanga kwaye utsalela ingqalelo yethu kunqabile ngokuzithandela kodwa uhambo olungapheliyo lwabo batyhalela elinye ilizwe.
"Ndingathanda ukuvuyisa u-Abdulrazak Gurnah ngokuphumelela iNobel Prize for Literature - eli wonga lakhe libonisa indlela edinga ngayo ingxoxo edlamkileyo nenabele kwilifa lethu lobukoloniyali."
The IBhodi yezoKhenketho ye-Afrika (i-ATB) Ukwamkela impumelelo ka-Abdulrasak Gurnah, kunye noMongameli we-ATB u-Alain St. Ange wayenokuthi oku:
“SiyiBhodi yezoKhenketho eAfrika sivuyisana nombhali waseTanzania u-Abdulrazak Gurnah ngokunikwa iwonga leNobel ngo-2021 kuNcwadi. Wenze iAfrika ukuba neqhayiya. Ngokuphumelela kwakhe ubonakalisa ukuba i-Afrika inokukhazimla kwaye umhlaba kufuneka ukhulule amaphiko omntu ngamnye wase-Afrika ukuze sibhabhe. ”
UMongameli weBhodi yezoKhenketho yase-Afrika ebenyanzelisa i-Afrika ukuba iphinde ilibhale ngokwayo ibali kwaye akaze aphoswe lithuba lokuphinda abize eli khwelo, esithi ii-USP eziphambili zeAfrika ingangqinwa kakuhle ngabantu baseAfrika.
I-ATB iyaqhubeka nokunyanzela iAfrika ukuba imanyane ngakumbi njengoko ilungiselela ukuvulwa ngokupheleleyo kwemizi-mveliso yezokhenketho.
U-Gurnah okwangoku ungunjingalwazi ovela kwizifundo zesiNgesi nakwizifundo zasemva kokubeleka kwiYunivesithi yaseKent.